के हो कुर्सीयोग? कसरी गर्ने? डा विनोद घिमिरे | Ayurveda Khabar
Doctor's ArticleYoga Asanas
के हो कुर्सीयोग? कसरी गर्ने? डा विनोद घिमिरे
योग पूर्वीय सभ्यताको एक महत्वपूर्ण विधा हो। जसले हामीलाई आरोग्य प्रदान गर्दै उच्चतम चेतनासम्म पुर्‍याउँछ।
पछिल्लो समयको व्यस्त तथा अधिक प्रतिस्पर्धी जीवनयापनसँगै योगको उपयोगिता बढिरहेको छ।विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रयोगबाट सिद्ध योग अबहाम्रो दैनिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यही भएर नै योगलाई विभिन्न ठाउँ र साधनका साथ अभ्यास गर्ने चलन बढेको छ्र।
यस्तो प्रयोगमध्ये योगमा कुर्सीको प्रयोग पनि एक हो।यसलाई कुर्सी योग पनि भन्न सकिन्छ।
सहज हिसाबले बस्नका लागि कुर्सीको प्रयोग गरिन्छ। यही कुर्सीको अधिक तथा अनुपयुक्त प्रयोग हाम्रा लागि धेरै रोगको कारण पनि बन्न सक्छ।
हामी कार्यालयमा धेरै समय कुर्सीमै बिताउछौं। अहिलेको सूचनाको युगमा त अधिक समय मोबाइल, कम्प्युटरको अत्यधिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।जसका कारण आँखा, घाँटी, कम्मर, हाडजोर्नीरोगबाट पीडित हुँदैछौं।यस्तो समस्याबाट पार पाउन कुर्सी योग उपयोगी हुन सक्छ।
कुर्सी योगको सुरुवात २०औंशताब्दीको पछिल्लो कालखण्डमा भएको पाइन्छ। यसको प्रयोग बुढ्यौली तथा शारीरिक रूपमा कठिन अभ्यास गर्न नसक्ने बिरामीहरूमा विशेष रूपले गरिन्छ।
कुर्सी योगको प्रयोगले शरीरका जोर्नीहरूमा लचकता बढाउन सहयोग गर्दछ। कुर्सी योगले तनावपैला गराउने हार्मोन (अयचतष्कय)ि को मात्रा घटाई विश्राम प्रदान गर्दछ। फलस्वरूप नसर्ने रोगको रोकथाम भई आरोग्य प्राप्त हुन्छ।
यसका अतिरिक्त लामो समय कुर्सीमै बिताउनुपर्ने पेसाका मानिसलाई पनि कुर्सी योग उपयोगी हुन्छ।
त्यसैले कार्यालय वा घरमै पनि कुर्सीको प्रयोग गरी योग गर्न सकिन्छ। सकेसम्म खाली पेट वा खाना खाएको ३ घन्टापछि योग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
कुर्सी योग गर्दा सकेसम्म शान्त ठाउँको प्रयोग गर्नुपर्छ। यतिबेला इलेक्ट्रोनिक सामानको प्रयोग गर्नुहुँदैन।
कुर्सी योगका तरिका
पहिले कुर्सीमा बसेर दुवै हात जोडेर नमस्कार गर्नुहोस्। सास तान्दै दुवै हात टाउकोमाथि तन्काउनुहोस्। सास छोड्दै अगाडि झुकेर दुवै हातले जमिन छुने प्रयास गर्नुहोस्। दायाँ घुँडालाई खुम्च्याउँदै छातीमा जोड्ने, दुवै हातले दायाँ घुँडाभन्दा मुनि समाई टाउको पछाडि लग्नुहोस्।
दायाँ घुँडा भुइँमा राखी बायाँतर्फ पनि सोही कर्म दोहो¥याउनुहोस्। दुवै हातले कुर्सीको भागलाई समाई दुवै खुट्टा अगाडि सिधा तन्काउनुहोस्।दुवै खुट्टा भुइँमा राखी दुवै हात टाउकोमाथि लगेर तन्काउनुहोस्।
उभिएरकुर्सीको दुवै खुट्टा फट्टाउनुहोस्। दुवै हात काँधको तहसम्म फैलाई दायाँ हातले घुँडा नखुम्च्याई दायाँतर्फ कुर्सीमा हात राख्नुहोस्।
यही अवस्थामा केहीबेर बस्नुहोस्। अब पुरानै अवस्थामा आउनुहोस्।त्यसपछि अर्कोतर्फबाट पनि सोही क्रम दोहो¥याउनुहोस्।
कुर्सीमा बसेर दायाँ हातले बायाँ घुँडासमाउनुहोस्। बायाँ हातले कुर्सीको माथिल्लो भागलाई समाई बायाँतर्फ टाउको फर्काएर बायाँ काँधमा हेर्नुहोस्। एकछिन यो अवस्थामा बसेर फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किनुहोस्। यो क्रमलाई अर्कोतर्फ पनि दोहोर्‍याउनुहोस्।
कुर्सीको छेउमा उभिएर बायाँ हातले कुर्सीमा समाउनुहोस्। दायाँ खुट्टा मोडेर पैतालाको बायाँ घुँडाको भित्री भागमा राख्नुहोस्। दायाँ हात टाउकोमाथि सिधा राख्नुहोस्। केही समय यो अवस्थामा रहनुहोस्। अर्कोतर्फ पनि यो क्रम दोहोर्‍याउनुहोस्।
कुर्सीमा बसेर दायाँ खुट्टा बायाँ पिडुँलाको पछाडि राख्नुहोस्। दुवै हात कुहिनाबाट मोडी एकापसमा बटारेर नमस्कार मुद्रामा आउनुहोस्। सिधा अगाडि हेरेर केहीबेर बस्नुहोस्।
कुर्सीमा बसेर खुट्टाका गोलीगाँठालाई १०÷१० पटक सुल्टो र उल्टो घुमाउनुहोस्। कुर्सीमा बसेर घुँडा खुम्च्याउने र तन्काउने १०/१० पटक गर्नुहोस्।
दुवै हात काँधको तहमा सिधा अगाडि राखी हातका औंलालाई नाडीको जोर्नीबाट तलमाथि १०/१० पटक मोड्नुहोस्।
दुवै हात काँधको तहमा सिधा अगाडि राखी कुहिनाबाट हात तलमाथि १०/१० पटक गराउनुहोस्।
दुवै हातलाई कुहिनाबाट मोडी हत्केलाका औंलाले काँध मा छोई काँधलाई पूरै ठूलो हुने गरी१०/१० पटक सुल्टो र उल्टो घुमाउनुहोस्।
टाउकोलाई घाँटीबाट तलमाथि, दायाँबायाँ १०/१० पटक मोड्नुहोस्।टाउकोलाई घाँटीबाट सुल्टो र उल्टो १०/१० पटक घुमाउनुहोस्। आँखालाई तलमाथि, दायाँबायाँ१०/१०पटक गर्नुहोस्।आँखालाई सुल्टो र उल्टो १०/१० पटक घुमाउनुहोस्।
कुर्सीमा बसेर आँखा बन्द गरी लामो सास लिँदै पेटलाई फुलाउनुहोस्। सास छोड्दै पेट खुम्चाउनुहोस्। यो क्रमलाई ५ मिनेटसम्म दोहो¥याउनुहोस्।
कुर्सी नाडी शुद्धि प्राणायाम
ढाड सिधा गरीदायाँ हातको बुढीऔंलाले दायाँ नाकको प्वाल बन्द गरीबायाँ नाकको प्वालबाट सास तान्नुहोस्। बायाँ नाकको प्वाल बन्द गरीदायाँ नाकको प्वालबाट सास फ्याँक्नुहोस्। फेरि दायाँ नाकको प्वालबाट सास तानी बायाँ नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्। यो क्रमलाई ५ मिनेट दोहोर्‍याउनुहोस्।
कुर्सीमै बसेर आफ्नो ध्यान नाकको प्वालमा लाउनुहोस्। नाकबाट आइराखेको र गइराखेको सासलाई हेर्नुहोस्।
कुर्सीमा सजिलोसँग बसेर आँखा बन्द गर्नुहोस्। खुट्टादेखि टाउकोसम्मका हरेक अंगमा क्रमशः ध्यान पुर्‍याउँदै विश्रामसमेत दिँदै जानुहोस्।
टाउकोमा पुगिसकेपछि आफ्नो ध्यान शरीरभन्दा बाहिर निलो आकाशको कल्पना गरी शान्त ठाउँको कल्पना गरी गहिरो निद्रामा पुग्नुहोस्।केही समय यो अवस्थामा रही पुनः शरीरमा आफ्नो होस फर्काउनुहोस्।बिस्तारै आँखा खोली आफूभित्र भइराखेका परिवर्तनहरू महसुस गर्नुहोस्।
Previous articleचिकित्सामा कलाको प्रयोग
Next articleको हुन बीएएमएस डाक्टर ?